Translate Myanmar (Burmese) to Estonian | Multilang.space
translate Myanmar (Burmese) to Estonian, Myanmar (Burmese) to Estonian translations, Myanmar (Burmese) to Estonian Google Translate ,
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား Tere kuidas sul läheb
မည်သူမဆိုရှိပါသလား? Kas keegi on?
ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ Ma armastan sind tõesti nii palju
ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ, Kui palju see hamburger maksab?
သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား? Kas saate helistada mulle taksoga?
ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး mul on kahju
တဆိတ်လောက် Vabandage mind
ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို Olen huvitatud
အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ Minu lend oli hilinenud
ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို Ma olen siin äri
မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည် Tere minu nimi on
ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို Vabandust, aga olen abielus
ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ် Tahaksin teilt küsida
သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား? Kas te võtate mind lennujaamasse?
ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ Milline on õige aeg, palun?
အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ? Kus on lähim politseijaoskond?
ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား? Kas ma võin telefoni laadija laenata
ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား? Kas sa saad mind aidata?
ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ? Telli mulle jook, palun?
ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ? Kui palju see maksab?
ငါ gluten မှမတည့်ဘူး Ma olen gluteeni suhtes allergiline
ဆရာဝန်ခေါ်ပါ Helistage arstile
ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော Kas on olemas arst?
ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား? Kas mul on kõne?
ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။ Helista mulle oma bossin palun.
ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် See koht on väga tore
ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ Võta mind hotelli juurde
အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ? Mis on minu tuba?